Fampiharana ny ankizy
Raha mieritreritra ianao fa ny fampiharana ny fangatahana dia fihetsika manjombona sy manalavitra, dia sahy manalavitra ny fisainanao. Ny asa dia iray amin'ireo hetsika tiany indrindra amin'ny ankizy amin'ny vanim-potoana rehetra. Ny fampiharana tsotra indrindra dia mahafinaritra azy ireo. Na ireo ankizy tsy te-hanintona azy aza, dia faly mametraka eo amin'ny takelaka misy ny singa tsirairay ao aminy, manangona ny tarehin'ireo tarehin-tsoratra tiany sy kilalao tiany indrindra. Ny fanaovana fampiharana amin'ny ankizy, dia afaka manampy amin'ny fampivoarana ireo fahaiza-manao izay hanampy ilay zaza amin'ny hoavy mba hisafidianana ny singa tsara amin'ny sary, mba hahitana vahaolana loko mahomby.
Miomana amin'ny fampiharana amin'ny ankizy
Ny fampiharana dia azo atao tsy amin'ny taratasy ihany, fa koa avy amin'ny lamba, plastinina, servisy, mololo, ravina. Saika ny fitaovana rehetra mety.
Ny ankizy kely kokoa, ny zavatra bebe kokoa tokony hataonao. Tsy afaka mamantatra izay tokony hataony sy ny fomba ny zaza. Noho izany, tsy maintsy mamorona sombin-javatra ianao, manapaka tapa-taratasy na taratasy, saingy azonao atao ny manely ny lakaoly ary mametraka izany eo amin'ny taratasy sy ny zaza. Na dia toa manjavozavo aza izany, tandremo ary avelao ny ankizy hanao azy irery. Amin'izany fomba izany dia ho afaka hahatsapa ho tompon'andraikitra amin'ny asany izy.
Miomàna ho an'ny penina
Mba hanaovana fampiharana amin'ny zaza mbola kely, dia ilaina ny manantona ny rantsan-tananao mialoha. Ireto misy andininy vitsivitsy momba ny fanabeazana ara-batana amin'ny ankizy.
Ilay bera dia nandeha namakivaky ny ala (manahaka ny mandeha miaraka amin'ny fanondro sy ny rantsan-tanana midina)
Eny, fanangonana holatra . (Mamikitra amin'ny totohaka ny rantsantanana rehetra, manamboatra harona)
Nitondra ny reniko sy ny raiko aho. - (manaisotra ny totohondry, manova ny palmia ny tanana)
"Eny, misaotra anao, malemy." (ny lohanao)
Ny tongotra vy eny amin'ny arabe (mametraka ny endriky sy ny rantsan-tanana eo amin'ny latabatra, ny sisa - amin'ny totohondry)
nihazakazaka haingana ny tongony . (simule running)
Noraisina ny tongotra
Lalina feno. (mihorohoro)
Safidy amin'ny lesona
Rehefa milalao dia aza adino ny miresaka amin'ny ankizy, manaisotra ny fihetsikao rehetra. Ohatra: "Jereo ny aretin-tsoavaly, miantsoantso hoe:" Tsy manana tasy aho. " Vanya, mamindrà fo amin'ny atodin'akoho, ataovy lavaka izy. " Noho izany, tsy dia mahaliana anao fotsiny ilay zaza, fa koa manampy amin'ny fampandrosoana ny lahateniny. Ao anatin'izany toe-javatra izany no tena ahafantarana ny voambolana vaovao.
Andeha hodinihintsika ny karazana lalao famoronana.
"Miarahaba ny mpanao hatsikana." Noho izany, manamboatra plastika vita amin'ny plastika amin'ny loko samihafa (diamond tsy mihoatra ny santimetatra) ary angataho ny ankizy mba "hikapoka" azy ireo eo amin'ny sary (aloha tokony ilainao ny manidina ny plastika voatahiry miaraka amin'ny ankihibenao, mamelatra izany, ary avy eo dia manipy izany miaraka amin'ny ankihibenao amin'ny lafiny hafa).
Karazana fampiharana avy amin'ny taratasy "Balls ho an'ny bitro, baolina ho an'ny orsa". Ho an'ity fampiharana ity dia mila manomana saribakoly taratasy volom-paritra roa lehibe ny olon-dehibe - lehibe sy kely, ary koa sary miaraka amin'ny sarin'ny bara sy ny baomba. Angataho ilay zazakely mba hamaritra hoe iza amin'ireo baoritra dia tokony homena ny boka lehibe sy ilay bitro kely. Ankafizin'ny ankizy ny fanatanjahantena ho an'ny sokajy, ka io lalao io dia hanampy amin'ny fananganana ny famoronana ny matematika indrindra, izay tsy tia ny sary.
Ary ity no vokatra
Ary ankehitriny, ny sekreteranao dia vonona. Aza adino ny midera an'io zazakely io, mariho fa ilay zaza no tena tsara indrindra. Tsara kokoa ny tsy manondro fotoana ratsy, indray mandeha, fa aorian'ny fotoana, ary tsy misy eo anatrehan'ny hafa. Raha tsy izany, dia mety hanakivy kokoa ny fihazana izany.
Ataovy am-panajana tanteraka ny vokatry ny asanao any amin'ny toerana manan-tantara (ohatra, eo ambonin'ny latabatry ny zaza, ao amin'ny gardrobe ao amin'ny garderie), etsy ankilany, mba ampisehoanao ny ankizy fa tena zava-dehibe aminao ny asany, amin'ny lafiny iray, manaja ny asany.
Fitaovana ho an'ny zazakely
Christmas Star - asa ho an'ny fifaninanana
Inona no tokony hiarovantsika ny ankizy?
Ahoana no hanomanana zaza hianatra?
Ny sarin'ny ankizy hatramin'ny 9 mey
Ahoana ny fomba hanamboarana balsama tsara?
Inona no azonao atao amin'ny renivola mena?
Dokam-barotra momba ny fahaterahan'ny zaza
Ahoana no fomba ampianarana ny ankizy mba hilalao saka?
Ahoana ny fomba hanaovana ny kibon'ny mpifaninana?
Ahoana no ahafantarana ny filaharana ho an'ny kindergarten?
Andro fitsaboana any amin'ny kindergarten
Kitapo an-dakozia miaraka amin'ny wallpapers misy sary
Ny rindrina ao amin'ny efitrano fandriana
Curd alohan'ny fampiharana
Hayden Panettiere: ny famaranana lava lava!
Ny fiterahana amin'ny herisetra
Karazana vato inona no mety amin'ny Capricorns?
Tena tebiteby mafy
Fifehezana fibro-adenomatosis amin'ny trondro mamaitra
Sakafo - voatokana
Pandora hoditra vita amin'ny hoditra
Taylor Swift no mpihira ara-bola mahomby indrindra ho an'ny gazetiboky Forbes
Inona no tsy ahafahanao mihinana melon ary nahoana?
Pasta miaraka amin'ny kalamanja